JKR KR - 1000 NFC bluetooth 4.1 bevielis garsiakalbis kaina nuo ...
အစဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံ technique ကိုအသံနည်းပညာJKR KR - 1000 4.1 NFC ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
JKR KR - 1000 4.1 NFC ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်မတ်လ 2020,51:17 pm တွင်
JKR KR - 1000 4.1 NFC ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုအသံချဲ့စက်
JKR KR-1000 СТОИТСВОИХДЕНЕГ ??
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: JKR KR - 1000 4.1 NFC ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
X ကိုက x 32.50 10.00 8.00 စင်တီမီတာ x ကို 12.8 3.94 3.15 လက်မ x ကို
X ကိုက x 28.50 5.50 4.50 စင်တီမီတာ x ကို 11.22 2.17 1.77 လက်မ x ကို
classical, ပျော်စရာ, အိတ်ဆောင်
TF Card ကိုတိုးချဲ့
ယင်းမက်စ်မှ 32G ။ (မပါ)
ဘလူးတုသ် TF / Micro SD Card ကို, 3.5mm plug ကိုအတူဖုန်းများအတွက်, အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ Enabled
aux, မိုက်ခရို USB Power ကတာဝန်ခံဆိပ်ကမ်း, TF Card ကိုပေါက်
ဘလူးတုသ်လော်စပီကာ, TF Card ကိုဂီတ Play, Volume ကိုထိန်းချုပ်ရေး
iPhone, iPod, MP3, TF / Micro SD Card ကို
JKR KR 1 x - 1000 NFC ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုအသံချဲ့စက် 4.1, 1 x ကိုကို USB Cable ကို, 1 အင်္ဂလိပ်နှင့်တရုတ်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးအသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ် x, 1 3.5mm aux Cable ကို x
JKR KR - 1000 4.1 ကြိုးမဲ့ NFC ကိုဘလူးတုသ်နာယကဗီဒီယိုများ
အဘို့အ9ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း JKR KR - 1000 4.1 NFC ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
Ragesh Raghavan - 2019 10 ဇွန်
ဤသူကားငါ၏ပထမဦးဆုံး Bluetooth ကိုစပီကာဝယ်ယူဖြစ်ပါတယ်။ ငါအိန္ဒိယအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ဆိုဒ်များတွင်သုတေသနတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်, AliExpress ဒီမှာဤဝယ်ယူမှုနှင့်အတူရှေ့ဆက်မသွားမီ။ ငါမှာကဒီမှာဝယ်လို့မှကောက်ချက်ချ GearBest ငါသည်ဤထုတ်ကုန်များက Spellbound မိပါတယ်။ အံ့သြဖွယ်အရည်အသွေးကို။ ဂရိတ် features တွေ။ ဂရိတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်ဘေ့စ။ တည်ငြိမ်ပြီးအစိုင်အခဲတည်ဆောက်။ ထိပ်တန်း surround sound ။ ဤအရာအလုံးစုံကိုက်ညီပြီးပြည့်စုံသောဘက်ထရီ။ အလွန်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်များအတွက်ပွိုစျေးနှုန်း။ ကျွန်မတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောထုပ်ပိုးအတွက်ဒီထုတ်ကုန် Received ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် GearBest။ ယခုတွင်ငါသည်လကြာ3အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ငါဒီထုတ်ကုန်အကြံပြုမယ်လို့နှင့် GearBest သံသယများနှင့်မဆိုင်းမတွ။ အဘယ်သူမျှမ Cons ။
Dada - 2019 10 ဇွန်
ငါဒီပီတို့ကလုံးဝအံ့သြမိပါတယ်ဒါကသာပြောနိုင်ပါသည်။ ငါသည်လည်းတစ်ဦးကို Sony 10w စပီကာများရှိသော်လည်း, ဒီအံ့သြစရာ JKR kr1000 မှအနည်းငယ်ယုတ်ညံ့သည်။ အဆိုပါအသံဘေ့စပင်အနိမ့်အသံအတိုးအကျယ်မှာအလွန်အစွမ်းထက်သည်ထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လက်၌ဖွင့်လျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာတုန်ခါမှုခံစားရသည်။ စျေးနှုန်းကဒီစပီကာအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်များအတွက်သေးငယ်လွန်းသည်။ ငါရေကြောင်းနည်းလမ်းအဖြစ် DHL ရွေးချယ်သောကြောင့်ငါဆက်သားစွဲချက်ငါစပီကာအပေါ်ကိုပေး၏ပေမယ့်ငါနောင်တမရကြဘူးဒါကစျေးနှုန်းဒါက totalized ပေးဆောင်ခဲ့ရသည်ဒီဆက်သား၏ထူးဆန်းတဲ့စည်းမျဉ်းများ။ ငါလုံးဝမယ့်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဒါကတန်ဖိုးရှိတစ်စပီကာကျေနပ်မိပါတယ်။ ကြေးဇူးတငျစကား gearbest nothiiiiing
Armando - 2019 10 ဇွန်
ဘလူးတုသ်စပီကာစျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးအလတ်စား, အဘေ့စ, နက်ရှိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ Powerfull ¡ပင်နိမ့်တဲ့ volume level မှာပါ! အဆိုပါ dn ။ function ကို Excel (Tree အဆင့်ဆင့်, ဘေ့စမြင့်မားခြင်းနှင့်ပတ်လည်) လွယ်ကူသောတွဲဖက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ငါ့အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ la mejor en bocina CATEGORY တွင် Tien Bajos Profundis, Clare က y Fuertes, ¡၎င်းသည်ယခုဆိုလျှင်အတူ bajo volumen! (Algo Que မျှ Las Que demain cumplen သူ probado bocinas, otras bocinas tienen buen bajo ဘာဟာ pero cuando el volumen bajo el se pierde) တစ်ဦး Secas Bien los medios y က Agudos Suen ၏ sonidos ။ la funciónက de equalización Tien tres Nivel, bajo, y က Agudo ပတ်လည်။ Yo Prefiero el Modo ပတ်လည်။ la vinculación es muy Facility ။ la ငါ့ကိုဟက်တာချေးငွေကာလ hasta 8 horas en uso ပုံမှန်batería။ Esta bocina အတွက်convirtió en သည် Mi Favorita ။ တစ်ဦးကမြက်ပင် muy alto volumen က de una အထူးသဖြင့် "cartoneo" por los Bajos ။ hay Que los reducir သင်္ချိုင်း en tu dispositivo reproductor ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Agudos pudieran SER Mejorada ။
K812 Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
iCHENLE L ကို - 088 FM ရေဒီယို